लाखौंका एक भाग्यमानी किरण कुमार श्रेष्ठ जो राष्टिय वाणिज्य बैंकका सीइओ सहित बीमा समिति र कर्मचारी सञ्चयकोषको पनि सञ्चालक ? - Aathikbazarnews.com लाखौंका एक भाग्यमानी किरण कुमार श्रेष्ठ जो राष्टिय वाणिज्य बैंकका सीइओ सहित बीमा समिति र कर्मचारी सञ्चयकोषको पनि सञ्चालक ? -
किरण कुमार श्रेष्ठ बैकिङ्ग क्षेत्रमा चर्चित नाम पक्कै हो । उनी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ छन् । यो सबैलाई थाहा नै छ । यसको अलबा उनी सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चयकोष र बीमा समितिको सञ्चालक पनि छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो पनि सत्य हो ।
भनिन्छ सबै कुरा भाग्यमै लेखेर आउने किरण कुमार श्रेष्ठ लाखौं मध्येका एक भाग्यमानी भित्र परेका छन् । हामीेले यो कुरा किन उठाउन खोजेका छौं भने एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख एउटा संस्थामा र अरु दुई संस्थामा कार्यकारी प्रमुखलाई नै निर्देशन दिने उच्च पद सञ्चालक हुनुले कस्तो सन्देश दिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विश्वासपात्र श्रेष्ठ एक ठाउँमा मात्र होइन अर्थमन्त्रालयकै प्रतिनिधी सञ्चालक भएर जाने ठाउँ बीमा समिति र कर्मचारी सञ्चयकोषमा समेत सञ्चालक बने । यस अघि कर्मचारी सञ्चयकोषमा कृषि विकास बैंकबाट प्रतिनिधि पठाउने परम्परा थियो । यो अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक तोडेका छन् ।
सीइओ श्रेष्ठलाई किन १ ठाउँ होइन ३ ठाउँको महत्वपूर्ण पद अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले दिए यसको खोजी शुरु भएको छ । बैंकहरुले बीमा समिति, कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थामा तलरता अभाव हुँदा डिपोजिट अर्बै ल्याउने प्रचलन छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ किरण कुमार श्रेष्ठ यी दुबै संस्थाको सञ्चालक बनेपछि अरु २६ बैंकले यी संस्थाको डिपोजिट पाउने कुरै भएन कि कसो अर्थमन्त्री डा.खतिवडाज्यू ? के नेकपा भित्र अन्य बैकिङ्ग, बीमा विज्ञ अरु कोही छैन ? तीन÷तीन ठाउँमा अवसर एउटै व्यक्तिलाई कस्तो नियुक्ती हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ? आफ्नो मान्छे भएपछि सबै ठाउँमा एउटै व्यक्ति कारण के हो ? यसको उत्तर कसले दिने हो ?
किरण कुमार श्रेष्ठको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा करिब ४ लाख तलब छ । बीमा समिति र कर्मचारी सञ्चयकोषमा भत्ता महंगो छ । यी तीनवटै संस्थाबाट उनीले मासिक ६÷७ लाख बुझ्ने गरेको एक सञ्चालकले बताए ।
एउटै व्यक्तिले तीनवटा संस्था भ्यानु परेपछि कार्यकारी प्रमुख भएको बैंकलाई कसरी समय दिन्छन् र त्यस संस्थाको प्रगति कसरी हुन्छ ? यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ । पावर र शक्तिको भरमा तीन तीन ठाउँमा हालिमुहाली जमाउनेहरुको खेतीपाती अब बन्द हुनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू अब आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले यसको हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ । हामीले २÷३ ठाउँमा हालिमुहाली गर्नेहरुको तीव्र खोजी शुरु गरेका छौं । हेक्का होस् ।
अध्यक्ष चापागाईको बीमामा मनपरी